‘मर्जरको प्रयासमा छौं’ | Business and Economy of Nepal
‘मर्जरको प्रयासमा छौं’
Posted on March 19, 2012 by Babukrishna	नयाँ दिल्लीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा अध्ययन पूरा गरेका कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईसँग नेपाल बैंक, सानिमा विकास बैंक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । स्नातक तहसम्मको पढाइ काठमाडाँैमै गरेका उनी नेपाल बैंकमा ६ वर्ष काम गरेर प्रमुख व्यवस्थापकसम्म भए । सानिमामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा क्लिन इनर्जीमा बैंकिङ इकाई प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले सन् २००७ बाट कमर्ज बैंकमा काम सुरु गरेका हुन् । भट्टराईसँग सौर्यका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानी
समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
क्षेत्रको हिसाबमा बैंकिङ क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । पहिलेको जस्तो दु्रत गतिमा यो क्षेत्र गइरहेको छैन । कर्जाको माग अलिक कम र तरलता अलि बढी भएको अवस्था छ । गत त्रैमासिकको नतिजा हेर्दा समग्र बैंकको नाफामा ह्रास आएको छ । पहिल जुन गतिमा बैंकले नाफा कमाइरहेका थिए, त्यो अवस्था अहिले छैन । अघिल्लो वर्ष चरम तरलता अभावको अवस्था थियो भने अहिले तरलता बढीको अवस्था छ ।
तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचकाङ्क पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको छैन । अहिलेको अवस्थामा तरलता बढी भएर बैंकिङ वृद्धिदर सुस्त रहेको छ । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक सुरुदेखि नै स्थिर बैंकको अवधारणामा अगाडि बढेको थियो । तरलता व्यवस्थापन राम्रो गरेर बसेको हुँदा बैंकलाई तरलता अभाव अथवा अत्यधिक तरलताले केही फरक पारेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम ट्रेजरी बिल्स खरिदमा लगाउनुपर्ने र त्यसको प्रतिफल एक प्रतिशतभन्दा न्यून रहेकाले केही असर गरेको छ । पहिले ट्रेजरी बिल्सको आम्दानी १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुने गरेको थियो । अहिले २० प्रतिशत निक्षेपले नगन्य रूपमा मात्र कमाइरहेको छ । स्वास्थ्यका हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेको छ । चार अर्ब ७० करोडको निक्षेपमा चार अर्ब ६० करोड रुपियाँको ऋण गएको छ ।
उच्च ब्याजदरले कर्जाको माग कम भएको हो ?
खुला रूपमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तपाईंलाई पैसाको आवश्यकता थियो र त्यसबाट नाफा कमाउन नै ऋणीले पैसा लिने हो । सस्तोमा पैसा पाए न हामीले सस्तोमा ऋण दिन सक्छौ ? हामी पनि यही आर्थिक वातावरणमा बसेर बंैकिङ कारोबार गर्ने हुँदा अन्य उद्योगीले जे–जति समस्या भोगेका छन्, त्यो हामीले पनि भोग्नुपर्छ । हामीलाई मात्र पृथक राखेर हेरिनु हुँदैन । त्यसैले कुनै बेला बैंकले सात प्रतिशतमा पनि ऋण दिएको थियो । अहिले १४ प्रतिशत लियो भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । एक अर्काले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
निक्षेप खातामा सेवा शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने निर्देशनले के असर गर्दछ ?
साधारणतया बंैकले ब्याजदरको फरकबाट र विभिन्न सेवा शुल्क गरी दुई तरिकाले आम्दानी गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको निर्देशनले सेवा शुल्कबाट आम्दानी गर्न छुट दिए पनि कसैले बचत खाता नचलाएबापत त्यसको खाताबाट पैसा नकाट्ने भन्ने हो । त्यो एक हिसाबले ठिकै हो । सानो रकम भएको बचतमा पैसा काट्दा ग्राहक हतोत्साही नहोस् भन्ने मनसाय राष्ट्र बैंकको ठीक रहे पनि खुला बजारमा यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । खुला बजारमा जाने हो भने सेवा शुल्क लिने÷नलिने भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धामा नै छोड्नुपर्छ । मैले थोरै सेवाशुल्क लिएर ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिन्छु भने त्यसमा कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन ।
बैंकमा निक्षेप राखेपछि ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वमान्य सिद्धान्त यो होइन, जापानमा निक्षेपमा नकारात्मक ब्याज छ भने स्विस बैंकमा पैसा राख्दा उल्टो पैसा तिर्नुपर्छ । शुल्क लिने दिने भनेको सेवा लिने र दिने बीचको पारदर्शी सहमतिमा भर पर्छ । खुला बजारमा गइसकेपछि यस्ता क्षेत्रमा निर्देशन आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।
निक्षेप बढ्ने तर कर्जाको माग नबढ्ने के कारणले गर्दा भएको हो ?
देश भनेको तीन चिजले चल्छ– राजनीतिक, आर्थिक स्थायित्व र जनताको आत्मविश्वास । हामीकहाँ तीनवटै चिज छैन । झिनामसिना कारणले ५÷६ सय करोडको उद्योग बन्द हुन्छ । वातावरण नै नभएपछि कर्जा लिएर किन लगानी गर्ने ?
तरलता अभावको समयमा निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा बैंक कर्जाको विस्तार तीव्र थियो । अहिले क्रेडिट क्रन्च छ । त्यसो भन्नुको मतलब अहिले कोही पनि बैंक कर्जा विस्तार गर्न चाहिरहेका छैनन् र कर्जाको माग नभएको भने होइन । अहिले बैंकले कर्जा दिन चाहिरहेका छैनन् । ऋणीले पनि ऋण लिन चाहिरहेको छैन । कर्जा लिएर कहाँ लगानी गर्ने ? उद्योगधन्दा थप भएको छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्था छ । क्रेडिट क्रन्च भनेको न ऋण लिनेलाई र न ऋण दिनेलाई, दुवैमा उत्साह नहुनु हो ।
मर्जरको विषयमा बैंकको कस्तो नीति छ ?
हामी मर्जर प्रक्रियाको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ । साधारणसभाले उपयुक्त बैंकसँग मर्ज गर्ने भन्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । हामी अवश्य पनि मर्ज गर्छाैँ । यो सजिलो प्रक्रिया होइन । धेरै मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । दुई पक्षका कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र मर्जर हुन्छ । अहिले सकारात्मक कुरा के हो भने मर्जरका विषयमा बहस सुरु भयो । यो राम्रो कुरा हो । नतिजाका लागि केही समय कुर्दा राम्रै हुन्छ ।
Filed under: Interview Tagged: | Anal Raj Bhattarai, Commerz and Trust Bank	« सेवा शुल्क बन्देजले नाफा घट्ने सिमेन्टमा भारतको भर »